The Mirror oo kashifay in Mo Farah uu Arooskiisa ka qariyay Aabihiis - iftineducation.com
iftineducation.com – Aabe Muktar Farah, oo ahaa ninka Max’ed Faarax keenay boqortooyada UK gaar ahaan Ingiriiska si uu u bilaabo mihnadiisa orodka oo uu hibo ku leeyahay, wuu ka maqnaa jamaahiirtii farxadda kula dabaal degeysay Olympic Stadium sida lagu qoray warbixin dheer oo lagu daabacay warsidaha The Mirror.
Kadib libtii labaaleeydii dahabka ahayd ee uu ka hantiyay 2012 Olympics, Mo Farah wuxuu kasbaday quluubta reer Britain isagoo noqday wejiga ciyaarihii Olombikada ee 2012 London lagu dhigay.
Yeelkeede, waloow uu yahay ninkii ugu horreeyay ee British ah ee qaata billadaha 5,000m iyo 10,000m, aabihii isaga keenay UK ee misna ka caawiyay inay waayihiisu hana qaadaan wuu ka maqnaa mujtamicii ka qaylinayay Olympic Stadium.
Runriina aabe Muktar Farah muddo sanado ah wax war iyo wacaal ah kama hayo wiilkiisa, sida ay sheegeen walaalaha xidiggan oo kala ah Mahad iyo Axmed.
Iyagoo warbixin khaas ah siinayey Sunday Mirror, waxay walaalahan – oo ay hooyo kale dhashay – sheegeen inay kasii murgeen markii loo sheegi waayay guurka Max’ed Faarax ee 2010-kii uu ku guursaday gabadhii ay ilaa carruurnimadii isku cindanaayeen ee Tania oo ay wargaysyada uun ka arkeen.
Waxay sheegeen in aabe Muktar, oo iminka 53 jir ihi, uu muraara dillaacay markii uu ogaaday inaan arooska lagu casuumin.
Mahad ayaa yiri: “Taas baa aabbe ugu xanuun badnayd. Wuxuu doonayay wiilkiisa oo si dhab ah u aroosaya ee muu doonaynin isagoo warsidayaasha ku aroosaya.
“Muu doonaynin inuu subaxda xigta tooso oo lagu wargeliyo in wiilkiisu aroosay isaga la’aantii.
“Waxay ahaan jireen saaxiibo oo kale, balse waxay wax kastaahi is bedeleen markii uu caanka noqday.” ayuu daba dhigay.
Ahmed, 25 jir, wuxuu ahaa socod barad markii uu aabohood oo haystay dhalashada British-ka uu keenay Max’ed Faarax oo 8-jir ahaa xilligaasi iyo walaalkii Wahib oo UK la yimi si ay ugasoo baxsadaan dagaalladii Somalia.
Mataanka Mo ee Hassan ayaa baaqi ku ahaa dalka ay dagaalladu rifeen ee Somalia. Balse dhalintan kale waxay kala go’een in yar uun kadib markii uu Mahad dhashay 1994-kii.
Halkan ka DAAWO dabaaldeggiisa….
Soomaali Gaangis ah oo Magaalada Toronto Xaaraan ku Haystay oo lasoo Qab Qabtay (VIDEO)